83 129 285 mpo.
IDH (2019) Mihakatra 0.947 (ambony) faha 22
Ny Alemaina na Repoblika Federalin' i Alemaina (RFA) amin' ny fampiasana ôfisialy, dia firenena ny Eorôpa Andrefana. Manana morontsiraka amin'ny Ranomasina Avaratra i Alemaina, mizara sisin-tany amin' i Danmarka, Pôlônia, Repoblika Tseky, Nederlandy, Belzika, Loksemborga, Frantsa, Soisa, ary Aotrisy. I Alemaina dia repoblika federaly, misy faritra 16 any (Bundesländer na oficial Länder amin' ny fiteny alemàna).
Tamin' ny Andro Taloha, i Alemaina, tahaka ny fantatra amin' izao fotoana izao, dia printsipaotea miisa mihoatra ny telonjato izay mizaka tena avokoa.
Tao amin' ny Empira Jermanika Masina i Alemaina tamin' ny taona 962 hatramin' ny taona 1806, tao anatin' ny Konfederasiona Jermanika izy tamin' ny taona 1814 hatramin' ny taona 1866.
Tamin' ny nifaranan' ny Ady frankô-jermanika tamin' ny 1871, Lasa zana-tany Prosy (jereo Prusse amin' ny teny frantsay) izy ary ny Empira Prosy no nampiray an' i Alemaina taty aoriana: tamin' izany fotoana izany ny andron' ny Reich faha-2 na Reich Wilhelminiana. Ny faharesen' i Alemaina tamin' ny Ady Lehibe Voalohany tamin' ny 1918 dia nampiongana ny Reich Wilhelminiana ary nitondra ny fahatongavan' ny Repoblika tao Alemaina. Nanomboka ny Reich faha-3 tamin' ny taona 1933 nefa nihongana ilay izy tamin' ny taona 1945, teo arinan' ny Ady Lehibe Faharoa.
Lasa nipetrahan' ny tafiky ny firenena nandresy azy i Alemaina taorian 'ny Ady Lehibe Faharoa, ary tamin' io fotoana io no niforona ny Repoblika Federaly Alemàna (RFA) sy ny Repoblika Demôkratika Alemàna (RDA).
Nikambana ny RFA sy ny RDA tamin' ny taona 1990 (3 oktobra) taorian' ny nandravana ny Rindrin' i Berlin. I Berlin no renivohiny nanomboka tamin' ny taona 1991 hatramin' izao.
Niisa 82 tapitrisa ny mponina tamin' ny taona 2007, ary i Alemaina no firenena be mponina indrindra ao anatin' ny Vondrona Eorôpeanina.
Tsy manana olana mikasika ny jeôgrafia sy ny toetany i Alemaina. Tany lemaka ny any avaratra, eo anivo dia misy tendrombohitra efa tranainy sady ambany haavo, any atsimo misy ny Tendrombohitra Alpina. Any avaratra ihany i Alemaina no manana morontsiraka eo amin' ny Ranomasina Baltika.
I Alemaina dia firenena manan-danja amin' ny lafiny toe-karena sy amin' ny lafiny isa-mponina (demôgrafia).
Any andrefan' i Alemaina no misy an' i Eorôpa Rhinaina, izay faritany anisan' ny be orinasa indrindra ao Eorôpa ary anisan' ny manan-karena indrindra ao Eorôpa sy manerana ny tany io faritany io.
Ilay teny hoe Deutschland no manome ilay tantara lavan' i Alemaina. Nisy tamin' ny vohalohany ilay teny hoe thiuda izay midika hoe "mponina"; thiudisk no mpamaritra anarana. Nisoloin' ny Rômana hoe Theodischus ilay teny ary avy eo nivadika ho Teudischus. Nivadika Diutisca izy tamin' ilay fiteny alemana taloha (na koa fiteny todeska). Nivadika todesche izy amin' ny fiteny frantsay ary tatỳ aoriana dia niova ho tudesque. Ny fiteny italiana dia mampiasa ny teny tedesco rehefa manonona ny Alemàna.
Niovaova matetika ny sisitanin' i Alemaina tamin' ny taonjato faha-20. Namarana ny Empira Alemàna ny faharesen' i Alemaina tamin' ny taona 1918. Nahenan' i Fifaneken' i Versailles ho 468 776 km2 ny velarantan' ny firenena alemana (nefa 540 848 km2 ny velarantaniny tealohan' io). Verin' i Alemaina ny faritra Alsace-Lorraine. Sarahin' i Pôlônia i Prosy Atsinanana eo amin' ny faritra manodidina an' i Gdansk (Dantzig amin' ny teny alemàna).
Taorian' ny faharesen' i Alemaina tamin' ny taona 1945, eo amin' ny tany alemana ny tafiky ny firenena nandresy an' i Alemaina. Ary any atsinanana, misy alemana 11 tapitrisa mahery no noroahana satria lasan' i Pôlônia ny faritra atsinana ao Alemaina miaraka amin' i Prosy Atsinanana. Ny vokatry ny Ady Mangatsiaka dia ny fisarahan' ny faritra andrefana atao hoe Repoblika Federaly Alemàna (RFA) sy ny faritra atsinanana atao hoe Repoblika Demôkratika Alemàna (RDA) ho lasa firenena roa samihafa. Ny fiainana ao amin' ny RDA dia mitovitovy amin' ny firenena izay anjadian' ny Firaisana Sôvietika.
Tamin' ny 9 Novambra 1989, narodana ny Rindrin' i Berlin izay natsangan' ny Sôvietika tamin' ny taona 1961, herin-taona taorian' io, tamin' ny 1990, rava ny RDA. Io firenena vaovao io indray dia voatery nanao fanajariana any amin' ny faritra any atsinanana noho ny fahanteran' ny RDA taloha amin' ny lafiny ara-toekarena sy amin' ny lafiny fotodrafitrasa.
Ankehitriny, dia mbola misy tsi-fitoviana ny lanja ara-toekaren'ny faritany alemàna any atsinanana sy ny faritany alemàna any andrefana noho ny fisarahana nisy tamin' ny Ady Mangatsiaka.
Alemaina dia ahitana fanjakana 16:
Deutschland.de Archived Aprily 21, 2008 at the Wayback Machine — Official German portal
CIA statistics Archived Aprily 16, 2008 at the Wayback Machine
Albania - Alemaina - Andôra - Aotrisy - Belzika - Bielôrosia - Bolgaria - Bôsnia-Herzegôvina - Danemarka - Espaina - Estônia - Fanjakana Mitambatra - Finlandy - Frantsa - Grisia (na Gresy) - Hôngria (na Hongaria) - Irlanda - Islandy - Italia - Jeôrjia - Kipra (na Sipra) - Kôsôvô - Krôasia (na - Krôatia) - Letônia - Liktenstaina - Litoania - Loksemborga - Masedônia Avaratra (na Makedônia Avaratra)- Malta - Môldavia - Môntenegrô - Nederlandy - Nôrvezy - Okraina - Pôlônia - Pôrtogaly - Tsekia - Romania - Rosia - San-Marîno - Serbia - Slôvakia - Slôvenia - Soeda - Soisa - Tsekia - Vatikàna.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Alemaina&oldid=1041272"
Dernière modification le 8 Desambra 2021, à 10:50
Voaova farany tamin'ny 8 Desambra 2021 amin'ny 10:50 ity pejy ity.